Ukuthengisa Okuqondile Kushintshile - Hhayi Umthetho 40/40/20 Okwengeziwe | Martech Zone
NgeSonto, Agasti 26, 2007 NgoMsombuluko, Agasti 27, 2007 Douglas Karr
Bengihlela ishelufu lami lamabhuku namhlanje ekuseni futhi ngaphenya incwadi endala ye-Direct Marketing ebenginayo, i-Direct Mail ngezinombolo. Ishicilelwe yi-United States Post Office futhi ibiyisiqondisi esihle impela. Lapho ngenza iposi eliqondile, ngaya kumphathi wendawo ngathola ibhokisi labo. Lapho sihlangana neklayenti elingakaze lenze i-Direct Mail phambilini, bekuyinsiza enkulu kubo ukuthi bafunde izinzuzo zokumaketha ngqo ngokushesha.
Ngibukeza le ncwadi namuhla, ngabona ukuthi zingakanani izinto esezishintshile kule minyaka eyishumi edlule - ngisho naseminyakeni embalwa edlule.
Umbono wakudala wokumaketha oqondile kwakuyi-40/40/20 Rule:
40% wemiphumela bekungenxa yohlu oluthumele kulo. Lolu kungaba uhla oluthengele ukufunisisa noma olungaba nohlu lwamakhasimende akho akhona manje.
40% umphumela ubangelwe ukunikezwa kwakho. Bengihlala ngitshela amaklayenti ukuthi isikhathi onaso emkhankasweni oqondile weposi wokuheha ithemba silingana nenani lezinyathelo eziphakathi kwebhokisi leposi nodoti.
20% komphumela ubangelwe ubuhlakani bakho. Kule mpelasonto ngithole ucezu lwemeyili ngqo kusuka kumakhi omusha wekhaya. Kwakunokhiye wokuhlola ekhaya eliyimodeli. Uma ukhiye ulingana, uwina ikhaya. Lokho kungumnikelo othakazelisayo ongavele ungenze ngishayele umphakathi oseduzane - ngobuciko obukhulu.
IDirect Mail neTelemarketing zisebenzise lo mthetho wesithupha emashumini ambalwa edlule. Isenzo se-Do Not Call Registry nesenzo se-CAN-SPAM sikhombisile ukuthi abathengi bakhathele ukungena futhi ngeke bakubekezelele ukucela ngaphandle kwemvume. Eqinisweni, ngikholelwa ukuthi ukungabi bikho kwemvume kuzodala umthelela omubi emikhankasweni yakho futhi kufanelekile ukukhulisa ukubaluleka kohlu.
I-Word of Mouth Marketing manje isiyingxenye ebalulekile yezokumaketha kwazo zonke izinkampani - kepha akuyona eyomnyango wezokumaketha, iphethwe yikhasimende. Uma ungeke ukwazi ukufeza izethembiso zakho, abantu bazozwa ngakho ngokushesha kunesikhathi esithathayo ukwenza umkhankaso wakho. Ukumakethwa kwezwi ngomlomo kuzoba nomthelela omkhulu kuyo yonke imikhankaso yokukhangisa. Uma ungakwazi ukuletha, ungathembisi.
Akugelezi kalula olimini, kepha ngikholwa ukuthi umthetho omusha yi-5-2-2-1 Rule
50% yemiphumela kungenxa yohlu oluthumela kulo futhi okubaluleke kakhulu kulolo hlu kuyimvume okufanele ukhulume nabo nokuthi luhloselwe kangakanani lolu hlu.
20% yemiphumela kungenxa yomyalezo. Ukuqondisa umlayezo kuzethameli kufanele. Umlayezo ofanele kuzethameli ezifanele ngesikhathi esifanele ukuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuthi ungayigcina imvume futhi uthole imiphumela oyidingayo ngemizamo yakho yokumaketha.
20% yemiphumela kungenxa yeLanding. Ngokumakethwa kwe-imeyili, leli yikhasi lokufika kanye nensizakalo elandelayo nokwenza umkhiqizo noma insizakalo. Uma ungeke ukwazi ukuletha izethembiso ozibekisile, izwi lomlomo lizokhipha lowo mlayezo ngokushesha kunokuba ungazama ukuwuhlanganisa. Kufanele "uhlabe" iklayenti kahle ukuze ube nokukhula okuphumelelayo ngokuzayo.
10% kusengubuciko bomkhankaso wakho wokumaketha. Ungase ucabange ukuthi ngithi ubuciko abubalulekile kangako kunangaphambili - lokho akulona iqiniso - imvume, umyalezo, nokufika kumane kubaluleke kakhulu kunangaphambili.
Umthetho wakudala wama-40/40/20 wokumaketha okuqondile awuzange ucabangele imvume, ukumaketha ngomlomo, noma ukwenziwa komkhiqizo nensizakalo yakho. Ngicabanga ukuthi i- 5-2-2-1 Umthetho enza!
Landela Ukwabelana Kwemakethe Yesiphequluli kusuka kuColts.com
Aug 26, 2007 ngo-9: 36 PM
Mangisho ukuthi isixhumanisi sakho sokukhangisa njengomugqa wokuqala wakho konke okuthunyelwe kubhulogi senza kube nzima kakhulu ukunquma ukuthi ngifuna ukufunda ini ku-FeedDemon. Njengoba ngingasasitholi isigaba sokuqala, ngithola isikhangiso kuphela, ngivame ukumaka konke okuphakelayo njengokufundiwe ngaphandle kokungena kuso.
Ngenkathi ngisiqonda isidingo sokwandisa ukuvezwa, ngingahle ngiphakamise ukuthi mhlawumbe ukubeka isikhangiso sombhalo emzimbeni wokuthumela kunokuba ulayini wokuqala uvumele okuqukethwe kwakho ukuthi kukhange kakhulu futhi kuvumele abantu abanjengami ukuthi banqume ngokukhalipha ukuthi babuka ukuthumela umqondo omuhle noma cha.
Aug 26, 2007 ngo-9: 54 PM
Tim, leyo impendulo enhle. Ngibonile ukuthi nami ngemuva kokukuthumela ngakhohlwa ngakho… kulobubusuku ngikudlulisele ezansi kokuphakelayo. Siyabonga ngokuthatha isikhathi ukungazisa. Ngiyakwazisa ngempela!
Aug 26, 2007 ngo-10: 17 PM
UDoug, ngiyabonga ngokuba nokuqonda nokuphendula.